Jobho 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jobho anoenderera mberi achipindura (1-22)
‘Mwari ari kundirwisirei?’ (2)
Kusiyana kwakaita Mwari naJobho munhu wenyama (4-12)
‘Regai ndimbozororawo’ (20)
10 “Ndinosema* upenyu hwangu.+ Ndichabudisa kunyunyuta kwangu. Ndichataura ndichirwadziwa!* 2 Ndichati kuna Mwari: ‘Musanditi ndine mhosva. Ndiudzei kuti muri kundirwisirei. 3 Zvinokubatsirai chii kuti mudzvinyirire,Uye kuti mushore basa remaoko enyu+Muchifarira zano revakaipa? 4 Mune maziso enyama here,Kana kuti munoona sekuona kunoita munhu here? 5 Mazuva enyu akaita semazuva evanhu vanofa here,Kana kuti makore enyu akaita seemunhu here,+ 6 Zvamuri kutsvaga chikanganiso changuNekuramba muchitsvaga chivi changu?+ 7 Munoziva kuti handina mhosva;+Uye hapana anokwanisa kundinunura paruoko rwenyu.+ 8 Maoko enyu akandiumba uye akandisika,+Asi iye zvino mava kuda kundiparadza zvachose. 9 Ndapota zvangu, yeukai kuti makandiumba nevhu,+Asi iye zvino mava kuita kuti ndidzokere kuguruva.+ 10 Hamuna here kundidurura semukakaUye kundikodzeka semukaka wakakora? 11 Makandipfekedza ganda uye nyama,Uye makandiruka nemapfupa nemarunda.*+ 12 Makandipa upenyu, mukandiratidza rudo rusingachinji;Makachengetedza upenyu hwangu.+ 13 Asi manga makaronga nechemumwoyo kuzoita zvinhu izvi.* Ndinoziva kuti zvinhu izvi zviri kubva kwamuri. 14 Dai ndakatadza, imi maingonditarisa,+Maisazondiregerera kukanganisa kwangu. 15 Kana ndiine mhosva, ndine nhamo! Uye kunyange kana ndisina mhosva, handigoni kusimudza musoro,+Nekuti ndakazara nekuzvidzwa uye nekutambudzika.+ 16 Kana ndikasimudza musoro, munondivhima seshumba+Moratidzazve simba renyu pandiri. 17 Munounza zvapupu zvitsva zvichindiwanira mhosvaMowedzera hasha dzenyu pandiri,Matambudziko achiramba achiuya pandiri akatevedzana. 18 Saka makandibudisireiko muchibereko?+ Ndingadai ndakafa pasina kana ziso rakandiona. 19 Ndingadai ndakaita sekunge kuti handina kumbovapo;Ndingadai ndakangobudiswa muchibereko ndichinanga muguva.’ 20 Mazuva angu haasi mashoma here?+ Iye ngaasiyane neni;Ngaabvise maziso ake pandiri, ndimbowanawo zororo*+ 21 Ndisati ndaenda kwandisingazodzoki,+Kunyika yerima gobvu,*+ 22 Kunyika yezarima,Nyika yakati ndo-o uye isina kurongeka,Yekuti kunyange chiedza chakaita serima.”
^ Kana kuti “Mweya wangu unosema.”
^ Kana kuti “mweya wangu uchirwadziwa.”
^ ChiHeb., “Uye zvinhu izvi makazvivanza mumwoyo menyu.”
^ Kana kuti “ndimbofarawo.”
^ Kana kuti “yerima nemumvuri werufu.”